हामी सबैले मिलेर देश बनाउनुपर्छ – लक्ष्मी लामा गुरुङ — Hamro Sanchar
हामी सबैले मिलेर देश बनाउनुपर्छ – लक्ष्मी लामा गुरुङ
नविन मनाङे प्रकाशित : २०७४/१०/१२ गते
मनाङ जस्तो विकट दुर्गम जिल्लामा जन्मेर हाल दक्षिण कोरियामा एनआरएनको अध्यक्ष जस्तो पदमा रहेकी लक्ष्मी लामा गुरुङले आफूलाई अब्बल बनाउँदै लगेकी छिन् । २४ वर्षदेखि कोरियामा रहेकी लक्ष्मीका अबका योजना के छन् त ? के भन्छिन् ? यो अन्तर्वार्ता–
तत्काल नै त्यस्तो योजना त छैन। तर हाम्रो शरिर यता भएपनि मन भने जन्म भूमिमा नै छ। हामी यहाँ बसेपनि नेपालकै लागी दिनरात सोचिरहेका हुन्छौँ। देश बाहिर हुँदा झन् देशको मायाँ बढ्दो रहेछ। हामीले कोरियाबाट आर्जन गरेको सिप, केहि पुँजीलाई नेपालमा नै भित्राउनुपर्छ। अब राजनितीक स्थाईत्व हुने संकेत देखिएको छ। सबै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई देशमा नै केहि गर्न अपिल गर्छु। हामी सबैले मिलेर देश बनाउनुपर्छ। देश हामीले नै बनाउने हो । बिदेशीले बनाउने होईन। व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले सानोतिनो उद्योग सन्चालन गर्ने योजना बनाएकी छु।-हाम्रा कुरा वाट साभार